Uchwepheshe we-Semalt uchaza indlela yokukhipha i-Ilovevitality no-Darodar Kusuka ku-Google Analytics
Uma usanda kusungula iwebhusayithi entsha yomkhiqizo futhi ubona into engavamile ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kunamathuba wokuthi uthola ithrekhi engafanele. UJulia Vashneva, Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uthi ama-spambots azothuthukisa izibalo zakho futhi ashise phakathi komkhawulokudonsa ezinsukwini ezimbalwa. Uzobona ukuthi lezo zimoto eziningi zizokwenziwa yi-darodar.com, ilovevitality.com, nezinye izimo zokudlulisa umoya. Umbuzo owodwa ozokwenza ingqondo yakho kungenxa yokuthi kwenzekani nokuthi ungasusa kanjani izinhlelo zokudlulisela izimpumputhe?
Isingeniso kuDarodar nase-Ilovevitality - no deposit bingo usa.com
I-Darodar ne-ilovevitality.com zibhekwa njengezimpikiswano zomoya. Zombili lezi zinsizakalo ziye zazulazula i-intanethi ngokubukeka okungalungile, kuyilapho zithi zithumela ukuvakashelwa kwangempela ngokusebenzisa ukumaketha kanye nemikhankaso ye-SEO. I-Ilovevitality.com ne-Darodar yiwona ama-robot azokhipha iwebhu ukuthi idonsa idatha yakho ye-Google Analytics. Ngeshwa, banikeza amahlumela amanga, futhi izinga lokunciphisa lihlale liphakeme kunalindelekile. Bakha ama-metrics wesayithi lakho futhi baphathisa kabi idatha ye-Google Analytics. I-Ilovevitality.com ne-Darodar zizenzekelayo futhi zihleliwe, zidale izinkinga eziningi kuwe. Ngisho noma ungakaze ubhalisele izinsizakalo zabo nezinhlinzeko zabo, nakanjani bangena ngaphakathi kuwebhusayithi yakho.
Isingeniso ku-Spam Referral
Akulungile ukuthi noma yikuphi ukukhangisa okuhle ngoba ithrekhi yekhwalithi ibaluleke ngaphezu kokukhangisa okuphansi futhi okungadingekile. Eqinisweni, abaningi be-webmasters bachitha amasayithi abo ngenxa yethrafikhi embi..Ama-spambots yiwona oyinhloko, futhi akulula ukuwavimbela. Ngenhlanhla, zikhona amathiphu, amacebo, namaqhinga okuvikela i-website yakho kusuka ku-spam ithrafikhi ne-bots. I-bots iqhubeka ithumela ithrafikhi enobungozi nedatha kumasayithi akho bese ihlaziya i-Google Analytics kakhulu.
Susa i-Darodar ngendlela ye-.htaccess
Uma ungazi lutho mayelana nefayela le-.htaccess noma i-FTP, ake ngitshele ukuthi ingenye yezindlela ezinhle zokususa iDarodar. Ungasusa ama-breathtransferrals nale nqubo, futhi kuzothatha imizuzu embalwa nje. Udinga ukufinyelela kuseva ye-FTP nefayela le-.htaccess. Uma kwenzeka, awukwazi lutho ngalezi zinsizakalo ezimbili, sikudambisa kule ndlela futhi sifuna ukuthi uqhubeke njengoba singafuni ukuthi ubhekane nanoma iyiphi inkinga esikhathini esizayo. Kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilula ukumisa i-Darodar, ilovevitality.com, nezinye izithunjwa ezimbi ekubhubhiseni indawo yakho. Vula ifayela le-.htaccess bese ufaka ikhodi ethile kulo. Le khodi izokusiza ukuvimbela ama-botnets eDarodar ngesikhathi esifushane.
Susa i-Darodar kusuka ku-Google Analytics
Uma ungazizwa ukhululekile ukusebenzisa izindlela ezingenhla, siphakamisa ukuthi ususe iDarodar ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Le akhawunti ikhiphe izinhlelo zokuLawula ukuhlunga, ezokusiza ukufihla ukuthungatha okungahambi kahle kusuka ku-ID yakho. Kufanele ukhumbule ukuthi izihlungi azikwazi ukususa ithrafikhi engaziwa yiyo yonke. Kunalokho, bangayifihla ekubukeni. Iya kwesigaba se-Admin se-akhawunti yakho bese udala i-Filter entsha. Akufanele ukhohlwe ukukhipha iDarodar bese ulondoloza izilungiselelo.
Isexwayiso: Sincoma ukuthi ungasebenzisi noma iyiphi yalezi zindlela ngaphandle kokuqinisekisa okufanelekile. Ithuluzi lokususa i-Darodar lingakwenzela izinkinga, ngakho kufanele ukhethe indlela efanelekile emva kokubonisana nochwepheshe wekhompuyutha.